Tag: n'ahịa ngwugwu ngwugwu | Martech Zone
Tag: n'ji ngwugwu ngwugwu
Ọ bụrụ na enwere otu ụlọ ọrụ anyị hụrụ na ọ gbanwere nke ukwuu n'afọ gara aga ọ bụ ụlọ ahịa. Ulo oru n'emeghi uzo ohuru ma obu ihe ndi ozo iji mee ka ndi mmadu mara onwe ha chotara onwe ha na nbibi n'ihi mkpochi na oria ojoo. Dabere na akụkọ ụlọ ahịa ụlọ ahịa kwụsịrị 11,000 na 2020 na naanị 3,368 ọhụụ ọhụrụ mepere. Na-ekwu okwu azụmahịa na ndọrọ ndọrọ ọchịchị Nke ahụ agbanwebeghị ọchịchọ maka ngwugwu ngwakọ ngwaahịa (CPG). Ndị ahịa gara na ntanetị ebe ha nwere